Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo duqeeyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandDiyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo duqeeyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe
November 10, 2016 Abdi Omar Bile Jubaland, Somalia 0
Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo duqeeyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror)Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh ayaa duqeeyay saldhig tababar oo ay Al-Shabaab ku leedahay gobolka Jubbada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya, sida ay ilo-wareedyada sheegayaan.
Diyaaradaha dagaalka ayaa duqeynta la beegsaday saakay oo Khamiis ah deegaanka Wataxa-Dhobley oo u dhow magaalada Buu’aale ee Jubbada Dhexe.
Ma jirto wax warbixino ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarka ilaa iyo hadda.
Ma jirto dal sheegtay masulliyada duqayntaas, laakiin diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa Kenya ayaa duqeymo joogto ah ka geystay meelaha ay Al-Shabaab ku xooganyihiin ee koonfurta Soomaaliya.